QALABKA LAGU KORIYO POLYCARBONATE: SIDA LOO KORDHIYO XOOGGA - DHISMAYAASHA
Sidee si wax ku ool ah u xoojinaysaa polycarbonate aqalka dhirta lagu koriyo
Nidaamka aqalka dhirta lagu koriyo ee polycarbonate waxaa marwalba la kulmay walaacyada deegaanka. Dabaysha iyo barafka marka ay dhacdo in dhismaha aan lagu xoojin meelo kale, wuxuu keeni karaa cawaaqib xun, sida: qayb ahaan ama gabi ahaanba burburin dhismaha.
Xilliga jiilaalka ayaa si gaar ah muhiim ugu ah, marka qadar ballaadhan oo baraf ah ay ku ururaan dusha sare. Sidaa daraadeed, milkiilaha daryeela waa in la fahmo dhibaatada sida si loo xoojiyo aqalka dhirta lagu koriyo kahor inta aaney bilaabmin jiilaalka.
Maxaa dhaawici kara aasaaska
Iskuulada caadiga ah ee daaqsinka ah waxay ku kala duwan yihiin qaabka, taas oo aad ugu sahlan barafka. Laakiin sababta ay weli u kulmayaan saqafkooda?
Dhibcaha halkan ku yaala waxay ku jiraan sifooyinka polycarbonate cell. Xilliga qaboobaha, xitaa haddii heerkulka hoos udhacdo -15 ° C, gudaha dhismuhu wuxuu u dhexeeyaa + 5 °. Duufaantu way kululaan, barafku wuu dhalaalaa, iyo sida qorraxdu u kacdo oo ay u barafto. Badbaadadu waxay noqotaa mid adag, taas oo ku saleysan saldhigga daboolka barafka adag, oo marmarka qaarkood culeyskiisu yahay 80 kg.
Hadda isbarbardhig. "Qalfoofka" ee aqalka dhirta lagu koriyo waxaa badanaa laga sameeyaa profile metal, taas oo ah waxyaabaha ugu caamsan. Iyo culayska uu u adkeysan karo waa wax ka badan 50 kg / m2. Waa wax iska cad inay muhiim tahay in la xoojiyo dhismaha.
Qalabka ugu daboolan ee daboolan waa muraayad, taas oo inta badan saldhig xoog leh lagu sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo. Xaaladda sida saqafka ah ee loogu talagalay isku dhafka barafka, ma welweli kartid. Haddii aad doorato polycarbonate, waxaa fiican inaad iibsato xaashiyahooda leh dhumucdiis 6 ama wax ka badan millimitir. Cunto ma siin doonaan culeyska miisaanka barafka.
Waa mid xiiso leh. Guryaha dhirta oo si adag loo dhisi karaa gacmahaaga!
Maxaa go'aamiya xoogga
Sida ay u caddaatay xagga sare, saqafku wuu burburin karaa sababtoo ah saldhig daciif ah. Warshaduhu waxay inta badan ku keydiyaan qaybta iskutallaabta ah ee sawirka galvanized. Isla mar ahaantaana, alaabtoodu waxay noqonayaan qiimo jaban oo qiimo jaban, laakiin tayada tayada leh ayaa si muuqata u muuqata. Waxaad xallin kartaa dhibaatadan siyaabahan soo socda:
burburinta dhismaha jiilaalka;
mararka qaar ka soo saari barafka saqafka dhismaha dhamaystiran;
rakibo boorsooyin khaas ah (inkastoo aysan tani xaqiijinaynin sharafta dhismaha);
iibso tusaaleyaal leh qaab xoojinaya;
Xoojinta saldhigga gacmihiisa, isaga oo ka dhisa qoryaha ama profile.
Dayactirka qorshaysan ee dhismaha iyo xoojintiisa, dabcan, wuxuu ka bilaabmaa kormeerka dhismaha, oo ay ku jiraan dhammaan faahfaahinta. First of dhan, si taxadar leh daaweynta polycarbonate. Diirad gaar ah ayaa la siiyaa dhammaan dildilaaca, qoob-ka-ciyaarka, dusha sare. Opacification waxay kaloo noqon kartaa sabab dareen ah. Intaa waxaa dheer, dhismaha oo dhan ayaa lagu hubiyaa roogga ama waraaqaha. Ujeedadani waxa fiican in la isticmaalo heer.
Haddii dhaawac aan la ogaan, derbiyada aqalka dhirta lagu koriyo si fudud ayaa loo nadiifin karaa gudaha iyo dibaddaba, fayodhowr iyo haddii loo baahdo, qayb ahaan bedelay ciidda. Waa hagaag, haddii burburka weli la helo, xoojinta aqalka dhirta lagu koriyo ayaa loo baahan doonaa.
Sida loo xoojiyo aqalka dhirta lagu koriyo (polycarbonate)
Xoojinta qaabeynta ugu kalsoonida badan iyo ugu yaraan kharashka dhaqaale siyaabo badan.
Xitaa haddii qaabka dhismaha beerta laga sameeyo biraha ama birta adag, marnaba ma noqon doonto wax ka badan taxadar in la baadho, oo muujinaya dhammaan xadgudubyada. Cilladuhu waxay noqon karaan neoplasms daacad ah oo ku saabsan qaybaha biraha, on qoryaha - caaryada iyo meelaha kale "daciif".
Si loo yareeyo "qalfoofka" oo aan si buuxda u burburin, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo nadiifinta marxaladdeeda ah iyo daboolida dusha sare ee ku jira sheyga si gaar ah loogu talagalay ujeeddadaas. Noocyada birta iyo alwaaxda si wanaagsan ayaa loo dhaqaa. Waxaa lagu talinayaa in la nadiifiyo dhammaan meelaha ay saameeyeen "maqaar" yaryar, ka dibna dusha sare ayaa lagu daboolaa antiseptics, caanaha, xeryaha lidka-ka-hortagga.
Calaamado kabid ah
Isticmaal mishiinka ama adigoo isticmaalaya mishiinka foorarka ah, waxaad u baahan tahay leexo xargo dheeraad ah. Waa inay ka yaryihiin rukunka dhismayaasha taageerada ee aqalka dhirta lagu koriyo. Wixii soo saaridooda, waxaad u baahan doontaa inaad xoojiso, biraha duuban ama tuubooyin xooggan, oo doorbidan qaybta labajibbaaran. Xoojinta waxaa lagu sameeyaa habka korontada korontada ku dhajisa shan santimitir oo ah waxyaabo la mid ah.
Badanaa isticmaal arjiga dhexdhexaadinta. Hase yeeshee, laguma dejin karo hoosta, iyo kan xigta, sida caadiga ah, iyada oo loo marayo mitirka. Sidaas darteed waxaad xoojin kartaa qaabka ugu fiican waxtarka: qaab-dhismeedku wuxuu u adkeysan doonaa baraf baraf ah ilaa 240 kg / m2.
Digniin! Markaad isticmaasho alxanka korontada ku xiran, xirmooyinka waa lagama maarmaan iyo daboolaya rinjiga ka hortagaya.
Beddelida alaabta wax lagu daboolayo
Ka hor inta aan la xoojin "qalfoofka" waa hubaal fiiro gaar ah u leh polycarbonate iyo dhumucdiisuna.
Xulashooyinka kharashka jaban ayaa badanaa laga sameeyaa maaddada daboolka 4mm weyn. Laakiin si ay dhismaha noocan oo kale ah u istaagaan sanadka oo dhan, ma aha mid ku haboon. Sidii horay loogu soo sheegey, polycarbonate leh 6 mm oo dhumucdiisuna waxay ku habboon tahay derbiyada, iyo 8mm saqafka (haddii saqafku yahay mid gaas ah).
Habka ugu caansan ee lagu xoojiyo oo loo abuuro aqalka dhirta lagu koriyo ee dabaysha rakibidda qalabka. Waxay ka sameysan yihiin alwaax, kabo iyo walxo kale oo daba joog ah.
Taageerada moodhalka polycarbonate waa laba nooc. Dhaqdhaqaaqyada taageerada waxay dhistaa duruufo: waxay taageertaan godka saqafka. Hase yeeshee, arjiga loo yaqaan 'transverse arcerse' oo kuxiran, ayaa loo kala soocayaa. Wixii iyaga ah, waxay u baahan tahay in ka badan, iyo in qaab-dhismeedkooda ay ka sii adag tahay. Si kastaba ha ahaatee, naqshadeynta ayaa ah mid la isku halleyn karo waxana ay adkeyn kartaa miisaan badan oo baraf ah.
Inta badan sagxadda saqafka ayaa sidoo kale xoojisay walxaha dheeraadka ah ee dheeraadka ah.
Waa in aynaan ilaawin wakhtiga dhismaha la xoojiyo. Maqaarka ayaa lagu rakibay ka hor intaan qabowgailaa iyo inta ugu dambaysa dunidu barafoobaan.
Wixii tixraac ah. Dhibaatadu waxay noqon kartaa mid culus. Haddii xilliga qaboobaha, xayawaanka cimiladu waxay u horseedi doonaan xaqiiqda ah in tuubooyinku ay bilaabi doonaan in lagu beddelo dhaxan (tani waxay si gaar ah u tahay calaamadaha gobollada dhexe ee Ruushka), qaabka xoojinta ayaa ciidda ku riixi kara. Ka dibna hubaal ma aha in laga fogaado dhaawaca gudaha.
Xoojinta qaab-dhismeedka - tani waa hal nooc oo keliya oo lagu xoojinayo. Laakiin waa inaad ka fekertaa asaaska dhismaha beerta. Waa inay si adag u istaagaan dhulka si ay si fiican ugu diidaan dabaysha xooggan. Tani waxay ka hortagi doontaa dhaqdhaqaaqooda aan la fasaxin.
Waa in la ogaadaa in dhismaha khafiifka ah, marka lagu daro, oo lagu garto dabaysha sare, ay si fudud uga soo bixi karto dusha ciidda. Sidaa darteed, ma noqon doonto mid macquul ah in horay loo rakibo saldhig strip. Haddii lagu rakibayo aqalka dhirta lagu koriyo iyadoo la raacayo dhammaan xeerarka la arko, dhibaatooyinka ma soo baxayaan.
Laakiin aasaaska monolithic iyo aasaasiga ah, sababo kala duwan, crack. Oo halkan, sidoo kale, waxaad u baahan tahay inaad si degdeg ah wax uga qabato. Inta badan, aasaas waa in la qodaa iyo aqoonsi sax ah oo ah meesha uu crack u sameeyay. Taas ka dib, qaladka waxaa ka buuxsamey xal gaar ah. Hoosudhaca waa in si taxadar leh loo sameeyaa si uusan qashinka si dhakhso ah u kordhin.
Inta badan, bannaanka u door bidaan qaab shimbir ah oo fudud. Isaga oo ku jira tilmaamaha loogu rakibayo aqalka dhirta lagu koriyo ee shuruudaha ugu hooseeya. Laakiin qaar ka mid ah tusaalooyinka qaar ayaa la bixiyaa iyada oo la dhigo isku xirnaanta muraayadaha L-qaabeeya dusha dhulka. Xaaladdan oo kale, baararka xajmiga (dhexroorka - illaa 0.95 cm) waxay u dhaqmaan sida qoryaha. Siddeedkooda badiyaa waxay leeyihiin dherer ah 15-20 cm Wakhti dheer, oo ku jira dhulka - illaa 45 cm.
Dhibaatooyinka kor ku xusan ma dhicin markiiba. Waxyeello u geysatey polycarbonate ama mugdiga dhismaha oo dhan ayaa si tartiib tartiib ah u dhici doona.
Laakiin si lama filaan ah oo qallafsan ama biraha shidaalka ah ayaa si lama filaan ah u dhici kara. Oo waxaad u baahan tahay inaad ka jawaabto tan sida ugu dhakhsaha badan. Biraha waa la toosiyaa, guddiga ayaa si wadajir ah loo garaacaa (sida caadiga ah, barafka ayaa ku dul riixaya iskudubar ku filan).
Si looga hortago dhibaatada ka soo noqoshada, dhibicda daciifka ah waa in la hagaajiyaa oo lagu xoojiyaa iyada oo la rakibayo weel dheeraad ah. Laakiin, haddii ay suurtogal tahay inuu beddelo qayb ahaan ama jabtay qayb ahaan, waxaad u baahan tahay inaad sameyso. Kaliya laguma talin in lagu sameeyo qabowga ama roobka. Wax wanaagsan ma ka iman doonaan shirkadan.
Dhibaatooyinka kuleelka ah
Haddii bacarshin ama madoobaado polycarbonate, qoyaanka ayaa u muuqda shanlada, iyo taargadu waxay bararaan ama ku qabtaan cimilada kulul, cilladahaas waa in sidoo kale la tirtiraa. Habka ugu muhiimsan waa gebi ahaanba beddel thermoplastic.
Qoraalka. Xadgudubyada yaryar sida dildilaasyada yaryar ayaa "la afuufaa" oo leh xalal hermetic gaar ah.
Gebogebada, waa in la ogaadaa in marka la ogaado waxyeellada dhaawaca aqalka dhirta iyo kicinta dambe, tallaabada ugu muhiimsani waa aqoonsiga sababta sida. Kaliya kiiskan, khaladaadka la midka ah ayaa laga hortagi karaa mustaqbalka.